IVilla yaBucala-Umbono woLwandle kunye neJungle-iWiFi ekhawulezayo
Playa Dominicalito, Provincia de Puntarenas, Costa Rica
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMariela
Thetha malunga neNdawo, indawo, indawo! I-Surfside Villa Dominicalito ibekwe ngokukodwa kwinduli ethe tyaba enendawo entle enombono wokuvasa omhlophe we-180 degree apho unokubukela i-surf imini yonke kwaye umamele ubusuku bonke. I-Surfside Villa Dominicalito ikwindawo yokuhlala enesango laseCanto del Mar (iNgoma yoLwandle) abaninzi abayijonga njengeyona "ndawo ilungileyo edolophini." Kukuhambo lwemizuzu esi-8 ukuya ePlaya Dominicalito kunye nemizuzu ukusuka ezivenkileni, kwiindawo zokutyela, nakwiindawo ezinomtsalane kubakhenkethi.
I-1500-sq foot enemigangatho emibini ye-turnkey villa ifakwe ngokupheleleyo, inefenitshala eyenziwe ngesandla kunye nokuhombisa, kwaye inamagumbi amabini okulala, iibhafu ezimbini ezinesiqingatha. Umgangatho ophezulu unendawo yokuhlala ebanzi kwaye eqaqambileyo enekhitshi, indawo yokuphumla, kunye negumbi lokutyela. Ngaphezulu kobungakanani beengcango zeglasi ezityibilikayo zingena kwibalcony enkulu kunye nethafa egqunywe ngokupheleleyo, ilungele ukonwatyiswa ngaphandle kunye nokujongwa kwezilwanyana zasendle- ngokubonwa rhoqo kweetoucans, sloths, iindidi zeentaka kunye neenkawu. I-Palex egubungele i-palapa (eqinisekisiwe iminyaka eyi-25) yandiswa ukusuka kuyilo lwangaphambili ukuze igubungele ngokupheleleyo i-terrace kunye ne-carport.
Njengoko usiya kumgangatho osezantsi, uya kufumana igumbi lebhonasi elisetyenziswa njengeofisi yasekhaya, igumbi lokuhlambela impahla, kunye namagumbi okulala amabini. Igumbi ngalinye lokulala libandakanya umbono wolwandle kunye nehlathi, igumbi lokuhlambela labucala, kunye neebhalkhoni ezigqunyiweyo. Igumbi lokulala elikhulu linegumbi lokuhlambela elitsha elihlaziyiweyo laseBali.
Yonwabela i-BBQ kunye nosapho lwakho nge-grill yethu yamalahle!
4.89 ·Izimvo eziyi-75
I-Playa Dominicalito isezantsi ngokuthe ngqo kwiCanto del Mar kwaye ibonwa njengenye yeelwandle ezintle kakhulu kulo mmandla ngenxa ye-cove eyenziwe ngusingasiqithi womhlaba ongena elwandle. Igqwesile ekuqubheni kwaye ikwalunxweme olulungileyo lwabaqalayo ukusefa. Ngaba ucinga ngokuba neentlanzi ezintsha kwisidlo sangokuhlwa ngaloo ngokuhlwa? Thenga, ngqo kubalobi basekuhlaleni! I-Uvita yimizuzu eli-15 emazantsi kwaye kule minyaka imbalwa idlulileyo ikhule yaba liziko lezorhwebo eliphithizelayo elineebhanki, izikolo zamazwe ngamazwe, iivenkile ezinkulu, iivenkile zekofu nokunye okuninzi. Ikwasebenza njengesiseko sotyelelo kwiMarino Ballena National Park, indawo yogcino lwaselwandle edumileyo edume ngokufuduka kweminenga yeminenga. I-Dominical yimizuzu emi-3 emantla kwaye yaziwa ngekhefu le-surf elaziwayo kwihlabathi kunye nabo bafuna amava eCosta Rican ayinyani. Uya kufumana iindawo zokutyela ezininzi ezimnandi, izitudiyo ze-yoga, abathengisi basekhaya, kunye neshishini elitsha.
Siyafumaneka ukukunceda ngayo nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa siya kukuhlonipha nokuba bucala kwakho.
Ukuba kukho nantoni na esinokuyenza ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi, nceda usitsalele umnxeba kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuba kwenzeke.
Ukuba kukho nantoni na esinokuyenza ukwenza ukuhlala kw…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Playa Dominicalito